Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigay gaari sahay u siday ciidanka DF - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigay gaari sahay u siday ciidanka DF
Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigay gaari sahay u siday ciidanka DF
Ciidamada Ahlu Sunna ayaa xalay magaalada Guriceel ku qabtay gaari Probox ah, oo casho iyo qaadba u siday Ciidamada Dowladda ee ku sugan deegaanka Good-wiil ee duleedka magaaladaasi.
Dhanka kale Warbaahinta Dowladda ayaa xalay baahisay in Ciidamada Dowladda ay gudaha u galeen Magaalada Guriceel.
Warsame Maxamed Faarax oo ka mid ah dadka reer Guriceel ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda ay ku sugan yihiin duleedka magaaladaasi, isla-markaana aanay weli gudaha u soo gelin magaalada.
“War aan la yaabnay ayuu noqday warka ka baxay Telefishinka Qaranka, ee sheegaya in Ciidamada Dowladda ay gudaha u soo galeen Magaalada Guriceel. Anaga ayaa dadkii deegaanka ah, warkaasina waxba kama jiro, ciidamadana sooma dhaafin deegaanka Good-wiil,” ayuu yiri Warsame Maxamed.
Warsame Maxamed ayaa xusay in xaalad kacsanaan ah ay caawa ka jirto magaalada, welina ay si buuxdo ugu sugan yihiin dagaal-yahanada Ahlu Sunna. Sidoo kale waxaa uu sheegay in dadkii ku haray magaalada ay bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaasi.
Next articleWar Deg Deg Dagaal culus oo saaka ka qarxay magaalada Gu